15 / 12 / 2020 05 / 01 / 2021 ရော့ Paton 1866 Views စာ0မှတ်ချက် 71742 Overlord နဂါး, Lego, Lego Ninjago, Lego Ninjago အမွေအနှစ်, lego ပြန်လည်သုံးသပ်
အတွက်သတ်မှတ်သည် Ninjago Legacy line သည်ယခင်ပုံစံအတိုင်းအမြဲတမ်းအခြေပြုစရာမလိုပါ 71742 Overlord နဂါး အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူပြသသည်။
2019 ရဲ့အလယ်ပိုင်းကနေအပေါ်ကိုအောက်ပါ 70680 ဘုန်းကြီးကျောင်းသင်တန်း လာ 71742 Overlord နဂါး, အတွင်းမှာယခုအချိန်အထိဒုတိယအစု Lego Ninjago ယခင်ပုံစံအပေါ် အခြေခံ၍ မရသည့်အစဉ်အဆက်
70680 နေစဉ်အလွန် The နဲ့တူနေတုန်း Lego Ninjago Movie ၏ 70606 Spinjitzu လေ့ကျင့်ရေး, ၎င်း၏ဇာတ်လမ်းအမှန်တကယ်၏ရာသီ 1 မှလှုံ့ဆော်မှုယူခဲ့ပါတယ် Ninjago ကေနှင့်ညလေ့ကျင့်ရေးတွင်သရုပ်ဖော်ရန်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်။ အလားတူပင် 71742 Overlord နဂါး ရာသီ2မှပုံပြင်များကိုအခြေခံကာ ဦး ဆောင်။ လူကြမ်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီး Overlord ကျောက်တုံးကြည်းတပ်ကိုဖန်တီးသူဖြစ်ပြီးသူ၏နဂါးပုံစံဖြင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
theme: Lego Ninjago အမည်သတ်မှတ်မည် - 71742 Overlord နဂါး ဖြန့်ချိ: ဇန်နဝါရီလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 24.99 / $ 29.99 / € 29.99 အပိုင်းပိုင်း: 5,544 အသေးစားပုံများ: 14
ဤအရာသည်နဂါးပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သော Overlord ၏ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည် 71742 Overlord နဂါး ရှည်လျားသော - စောင့်မျှော်, ၏ရာသီ2၌သူ၏အသွင်အပြင်ပေးထား Ninjago ဒီ set ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသောပြပွဲ, လမ်းပြန် 2012 ခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမှန်မှာ၊ ထိုအချိန်ကာလက 71742 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ဤအစောပိုင်းဗားရှင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပြသကာတွန်းတွင်တိုးတက်မှုများဖြစ်သည်။ Lego ဒီဇိုင်း - ပွဲတစ်ပွဲ၏ဒီဇိုင်းသောနှစ်ပေါင်းများစွာ Lego အစုံသည်လွန်စွာရှုပ်ထွေးပြီးလွန်ခဲ့သောရှစ်သို့မဟုတ်ကိုးနှစ်ကမြင်တွေ့ခဲ့သည့်မှောင်မိုက်သောခရမ်းရောင်နှင့်အနက်ရောင်သားရဲတို့ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ဒီအဆင့်အားဖြင့်အများဆုံး Ninjago ပရိတ်သတ်တွေလေ့ကျင့်ခန်းသိကြလိမ့်မည်။ The Lego အုပ်စုတော်တော်များများဟာစုံလင် art ဒီဇိုင်း၏ Lego လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကနဂါးများနှင့်ယခုမှစတင်ပြီးသည်ထက် ပို၍ ပို၍ လိမ္မာပါးနပ်စွာဖြင့်ပြသခဲ့သည် ideas အမျိုးမျိုးသော p အဘို့artသတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာဗေဒ၏။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မည်သည့်နီးပါးကိုမဆိုကောက်ယူနိုင်သည် Ninjago ယနေ့ဖြန့်ချိ။ မြင့်မြတ်သောနဂါးဖြစ်၏ artအတူကစားရန် iculated, အံ့သြဖွယ်အရောင်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကာတွန်းမော်ဒယ်။
71742 Overlord နဂါး ကွဲပြားခြားနားသည်, ထူးခြားသောအရောင်အစီအစဉ်မှအကျိုးခံစားခွင့်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ် ဦး ညိတ်အဖြစ် Ninjagoအစောပိုင်းနှစ်များတွင် Legacy အစုံသည်အုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲပုံသွင်းအပိုင်းအစနှစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခေါင်းများဖြင့်နဂါးများယေဘုယျအားဖြင့်ရှိကြသည်။ သင်မည်သည့်ခြံစည်းရိုးအပေါ်ကျသည်ကို မူတည်၍ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောနှင့်ပုံသွင်းထားသောခေါင်းများအကြားခြားနားချက်များသည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည် 71742 Overlord နဂါး နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံသွင်းခေါင်းကိုဒီဇိုင်း။ ၎င်းသည်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်းပုံနှိပ်ထားသောမျက်စိ၊ ရွှေသွားများနှင့်ပုံသဏ္jာန်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်လည်ပင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့အလွန်ကောင်းမွန်စွာအသွင်ပြောင်းလဲသောဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့အသွင်အပြင်ရှိသည်။ ဒီဟာကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊
အသေးစားပုံစံ ၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ သင်တန်းတွင် Overlord ကိုယ်တိုင် မှစ၍ ယခုအချိန်သည် 'လူ့' ပုံစံဖြစ်သည်။ တကယ်လို့မင်းကနဂါးပုံစံနဲ့ဇာတ်ကောင်ရရင်ဒီ version ကိုထည့်တာထက်ပိုကောင်းတာပေါ့။ သူ၌ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရန် Golden Lloyd ရှိသည်။ ဤ Ninja ပုံစံသည်အခြား ၂၀၂၁ အစုံတွင်တွေ့ရသော Golden Lloyd နှင့်ကွဲပြားသည်။ Element တွေကို၏ 71735 ပြိုင်ပွဲ.
သင်မှ 2021 minifigures မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ကြသည် Ninjago ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် - ပြပွဲရှိဇာတ်ကောင်များ၏ရုပ်ရည်ပေါ် မူတည်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်ပြည့်ဝသည်။
စျေးနှုန်းအတွက်မူ၎င်းသည်အမြင့်နှင့်အရှည်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ကြီးမားသောနဂါးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရာသီ2မှအဓိကရန်သူပုံစံ၏နဂါးပုံစံတွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ရာအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုထက် ပို၍ တွေ့ရသည်။ ပေါင် ၂၄.၉၉ ဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအသေးစိတ်အချက်ကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်တစ်နေရာမှာတောင်ပံများဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောခရမ်းရောင်ပလတ်စတစ်အပိုင်းအစများသည်၎င်းတို့ကိုကိုယ်စားပြုရန်နှင့်အများဆုံး p အတွက်ဖြစ်သည်art အလုံးစုံသောဗေဒနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်းခရမ်းရောင်နှင့်အတူအနက်ရောင်ပလတ်စတစ်သည်ဇာတ်ကောင်၏ပထမဆုံးသောမြင်ကွင်းကိုအုတ်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဆိုလိုတာကဘယ်မှာလဲ 71742 Overlord နဂါး အရွယ်အစားအပေါ်အထင်ကြီးခြင်းနှင့် articulation, နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုပို£ 17.99 မှာတစ် ဦး ထက်£ 24.99 နဂါးကဲ့သို့ခံစားရသည်။ ၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောနဂါးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းအားကောက်ယူခြင်း၏မျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
71742 Overlord နဂါး ကျွန်တော်တို့ကိုရဖို့ကိုးနှစ်နီးပါးယူ။ , ကျေးဇူးတင်စရာစောင့်ဆိုင်းဇာတ်ကောင်တရားမျှတမှုထက်ပိုပြီးတဲ့အစုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မျက်စိဖြင့်စွဲမှတ်ထားသောအရောင်အဆင်း၊ ရှည်လျား။ ရှည်လျားသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကျစ်လျစ်သောအတောင်ပံများသည်တောင်ပံဒီဇိုင်း၏ပေါ့ပါးသည့်သဘောသဘာဝကိုလျစ်လျူရှုရန်အကြောင်းများအားလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြပွဲတွင်ဖော်ပြထားသောအရာ၌ ​​Overlord ကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့မူရင်းပုံစံအဖြစ်။
အတွင်းတစ် ဦး ကရှားပါး Ninjago လုံးဝမူရင်းဖြစ်ဘို့အမွေလိုင်း, 71742 Overlord နဂါး နောက်ဆုံးတွင်စုဆောင်းသူများအတွက်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ကိုအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Lego Ninjago အမွေအနှစ် 71742 Overlord နဂါး မှာရရှိနိုင် LEGO.com ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ စ၍ ထိုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့သည် Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO Technic 42125 Ferrari 488 GTE AF CORSE # 51 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
LEGO Technic 42124 Off-Road Buggy ပြန်လည်သုံးသပ်မှု →